Federation of Nepali Journalists – Media Kurakani
अबको पत्रकार महासंघ
March 31st, 2018 Media Kurakani Opinion No Comments
गोविन्द आचार्य – १. लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हकको पक्षपोषण १.१. लोकतन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध प्रयोगका साथै पत्रकार हकहितको रक्षा हुनसक्छ भन्नेमा महासंघ दृढ छ। महासंघ सधैं लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन, राज्यका सबै निकायमा विभिन्न वर्ग,…
पत्रकार महासंघको चुनावमा कसले कति भोट ल्याए? मतपरिणामको पूर्ण विवरण
August 23rd, 2017 Media Kurakani Media News No Comments
नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशनबाट गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा ४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको छ। जसमा पदाधिकारीसहित अधिकांश पदमा नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टर नेपाल गठबन्धनका उम्मेदवारले जितेका छन्। हेर्नुस् निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतपरिणामः विजेताहरूको फोटो राससबाट लिइएको हो।
पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य निर्वाचित, कुन पदमा कसले जिते? पूरा विवरण
August 22nd, 2017 Media Kurakani Media News No Comments
नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा गोविन्द आचार्यसहित ४७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ। आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे। आचार्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार हुन्। भदौ ४ र ५ मा…
यसैबाट थाहा हुन्छ तपाईँहरू कुन स्तरको पत्रकार होः विजयकुमारको सम्बोधन
August 21st, 2017 Media Kurakani Media News No Comments
पत्रकार विजयकुमार नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार विजयकुमार पाण्डेय सम्मानित भए। आफूलाई पुरस्कार दिनु केही बेरअघि प्रेस स्वतन्त्रता सम्मानबाट अग्रज पत्रकारहरू सम्मानित हुँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा उपस्थित १५०० भन्दा बढी पत्रकारले ताली नबजाएकोमा रुष्ट बनेका उनले पत्रकारहरूलाई आग्रजहरूको सम्मान गर्न नजानेको भन्दै प्रहार…
महासंघका केन्द्रीय सभासद कहाँ कति? प्रदेश, जिल्ला, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अनुसारको विवरण
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सात प्रदेशहरू रहे पनि नेपाल पत्रकार महासंघमा भने १० प्रदेश छन्। महासंघको सांगठनिक संरचनाअनुसार सदस्यहरूलाई १० वटा प्रदेशमा बाँडिएको छ। नेपालका ७ संघीय प्रदेशहरूसँगै काठमाडौं उपत्यकालाई आठौँ प्रदेश, प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई नवौँ प्रदेश र एसोसिएटहरूलाई दशौँ प्रदेश नाम दिइएको छ। यी बाहेक ८ वटा वैदेशिक शाखा पनि…
पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि १११ जनाको उम्मेदवारी, सूची
August 20th, 2017 Media Kurakani Media News No Comments
नेपाल पत्रकार महासंघको जारी २५ औँ महाधिवेशनमा कूल ११७ जना उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यी मध्ये ६ जना लेखासमितिका उम्मेदवार हुन्। अध्यक्षमा ५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। हेर्नुस् सबै उम्मेदवारको सूचीः